Ciidamada Dowladda oo dib ula wareegay degmo laga qabsaday - Awdinle Online
Ciidamada Dowladda oo dib ula wareegay degmo laga qabsaday
Ciidanka Dowladda ayaa dib ula wareegay degmada Mahaddaay oo qaybo ka mid ah ay maanta gacanta ku dhigeen dagaalamaayasha Al-shaabaab.
Wararka aan helayno ayaa tilmaamaya in hadda gacan ku haynta degmada ay dib ugu soo laabatay Ciidanka Dowladda Soomaaliya, waxaana la sheegayaa in hadda xaaladda guud ee degmada ay tahay mid daggan.
Dad Goob joogayaal ah oo ku sugan degmada ayaa soo warinaya in haatan si buuxda ay Ciidanka Dowladdu ula wareegeen Mahaddaay , oo Saaka Al-shabaab ay gacan ku haynteeda kala wareegeen Ciidanka Dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul Goboleedka Hir-shabeelle.
Al-shabaab oo goor hore war kasoo saaray la wareegintankooda degmada ayaa sheegay in ay si buuxda u qabsadeen Mahaddaay, waxaana war kasoo baxay lagu sheegay in ay gacanta ku dhigeen degmada, waxaana warar lagu daabacay baraha Internet-ka ee AL-shabaab ayaa lagu sheegay in dhammaan xaafadaha Mahadaay ay ku sugan yihiin Shabaab, iyadoo Ciidanka Dowladda iyo kuwa Hir-Shabeelle ay aadeen dhanka saldhigga ciidamada AMISOM ee kuyaal warshaddii hore ee hubka duleedka Mahadaay, waa sida ay hadalka u dhigeen Shabaabe.
Degmada Mahaddaay oo qiyaastii 27Km ujirta magaalada Jowhar ayaa kamid aheyd deegaanada ay Ciidanka Dowladda iyo kuwa Hir-shabeelle gacanta ku ahyeen.
Previous articleDhageysiga Dacwadda Badda oo bilaabatay & ICJ oo ka hadashay maqnaanshaha Kenya
Next articleCiidamada Kenya oo dilay dad Shacab ah & Xoolo+Sawirro